IBM na Red Hat Face Lawit maka Xinuos Copyright ịda iwu | Site na Linux
IBM na Red Hat na-ekpe ikpe maka Xinuos ngabiga nwebiisinka
Xinuos gbara akwụkwọ na US Virgin Islands boro izu ohi nke ọgụgụ isi na nkwekọ nke ụlọ ahịa naanị jikọrọ ọnụ IBM na Red Hat. E hiwere Xinuos site na akụ nke SCO Group ihe dị ka afọ iri gara aga n'okpuru aha UnXis na n'oge ahụ, onye nọchiri SCO enweghị mmasị n'ịga n'ihu na esemokwu nke ikpeazụ a banyere Linux. Ikike nke nwebisiinka ugbu a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 17 ma na-agbarịrị ihu ugboro ugboro.
Xinuos bụ ụlọ ọrụ zụtara foduru nke SCO Group na 2011. SCtù SCO, ka ọ dị ugbu a, bụ ụlọ ọrụ ama ama ọ bụghị maka ngwaahịa ya, mana maka ịgba akwụkwọ ya megide IBM na Linux. Na 2001, SCO, ụlọ ọrụ Unix, sonyeere Caldera, ụlọ ọrụ Linux, iji mepụta ihe gaara abụ nnukwu ndorodoro Red Hat. Kama, afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, SCO gbara IBM akwụkwọ na mwakpo iwu na-akwadoghị na Linux.
Na 2003, SCO Group tinyere akwụkwọ mkpesa yiri nke amamihe na Xinuos. Ọ rụrụ ụka na SCO Group nwere ikike na koodu isi maka sistemụ arụmọrụ AT & T's Unix na UnixWare, na Linux 2.4.x na 2.5.x bụ ndị esiteghị na Unix, yana IBM emebila iwu nkwekọrịta ya site na nkesa koodu Linux.
New Lawsuit Alleges IBM Incorporated Unspecified Code si UnixWare na OpenServe Koodur nke ụlọ ọrụ na IBM nke AIX sistemụ arụmọrụ. Ọ na-ekwukwa na IBM na Red Hat kpara nkata ozugbo iji kewaa usoro ahịa niile. Unix-dị ka sistemụ arụmọrụ na nnukwu ohere azụmahịa maka IBM, na-ahapụ Xinuos n'azụ:
“Nke mbụ, IBM zuru akụ ọgụgụ isi nke Xinuos ma jiri ihe ahụ ezuru ezu wuo ma ree ngwaahịa nke Xinuos. Nke abuo, site na ihe onwunwe ezuru n'aka IBM, IBM na Red Hat kwetara n'ụzọ na-akwadoghị ịkekọrịta ahịa emetụtara ma jiri ike ahịa ha na-eto eto na-emegbu ndị na-azụ ahịa, ndị asọmpi na-agbanwe agbanwe, na ihe ọhụrụ n'onwe ya. Nke ato, mgbe IBM na Red Hat bidoro nkata ha, IBM nwetara Red Hat iji mee ka ọ sie ike ma mee ka atụmatụ ha bụrụ nke na-adịgide adịgide. "
Xinuos na-agbasawanye na mmebi ọ na-ekwere na ọ tara ahụhụ na ikpe zuru oke:
“N'ihi ọrụ ndị a, e wepụrụ Xinuos na isi ahịa ohere. Dịka ọmụmaatụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ Xinuos na-enye sistemụ arụmọrụ dabere na FreeBSD nwere nnukwu azụmaahịa azụmaahịa na ndị ọrụ azụmaahịa, Xinuos enwebeghị ike inweta ezigbo nkwado ego ma ọ bụ mmasị ndị ahịa maka ya. OpenServer 10 nke m nwere ike ma kwesiri ime n'ihi ọnọdụ ahịa. N'ezie, ahịa ahụ gbagọrọ agbagọ na Xinuos ekpebiela na ihe karịrị 70% pere mpe nke ndị ahịa ya nwere ike inye ikikere sistemụ arụmọrụ ọhụrụ ha karịa ka ọ ga-adị na ahịa na-arụ ọrụ. Mmetụta mgbapụ na Xinuos bụ nke ndị asọmpi niile nwere nha anya. "
Xinuos chọrọ na-ekwukwa na IBM duhiere ndị na-etinye ego site n’ikwu na akụkọ nke afọ gị kemgbe 2008 na ị nwere ikike nwebisiinka niile na Unix na UnixWare.
"Ọ bụ ezie na ikpe a gbasara Xinuos na izu ohi nke ihe ọgụgụ isi anyị," ka Sean Snyder kwuru na nkwupụta, "ọ bụkwa ịzụ ahịa ahịa na-emerụ ndị ahịa, asọmpi, obodo mepere emepe, isi mmalite na ihe ọhụrụ n'onwe ya".
Ọbụna ihe na-eju anya karị, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwu na IBM gosipụtara n'ụzọ doro anya iji bibie FreeBSD n'ozuzu ya: "Atụmatụ IBM na Red Hat bụ n'ụzọ doro anya iji bibie FreeBSD, bụ nke ọhụụ kachasị ọhụrụ sitere na Xinuos dabere."
Ọ na-aga n'ihu ịchọ ọ bụghị naanị nbibi, mana ngbanwe zuru ezu nke inweta IBM nke Red Hat: "A ga-ekwupụta njikọ ahụ megidere iwu ma ọ dịkarịa ala Nkebi nke 7 nke Clayton Act, na IBM na Red Hat ga-enye iwu ka ha kewaa ma kagbuo nkwekọrịta niile metụtara n'etiti ha."
Ọ bụ ezie na Red Hat azaghị mkpesa ahụ ozugbo, ọnụ na-ekwuchitere IBM Doug Shelton kwuru, sị:
"Nkwupụta nwebisiinka nke Xinuos na-ekwughachi ihe onye ochie ya na-ekwu, nke ndị Xinuos zụtara ikike nwebisiinka mgbe enweghị ego, ha enweghịkwa ihe ndabere." Ọ na-agbakwụnye na “ebubo nkwanye ntụkwasị obi nke Xinuos na-ebo IBM na Red Hat, ụlọ ọrụ ngwanrọ kachasị ukwuu n'ụwa, na-ekwenyekwa n'echiche. IBM na Red Hat ga-agbachitere iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro mmepe ngwanrọ na-emepe emepe na nhọrọ ebumpụta ụwa na ya mere asọmpi nke ngwanrọ mepere emepe na-akwalite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » IBM na Red Hat na-ekpe ikpe maka Xinuos ngabiga nwebiisinka
Penpot: Open Source Prototyping na Design Platform
Proxmox Mail Gateway 6.4 rutere na mmelite, mwekota na Proxmox Backup na ndị ọzọ